အောင်ဒင် – သိုင်းလောက | MoeMaKa Burmese News & Media
အောင်ဒင် – သိုင်းလောက
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄
အသတ်ခံရတဲ့ ဆရာသခင်အတွက် ကလဲ့စားချေဖို့
အဖြူ၊ အမဲ မသဲကွဲတဲ့ သိုင်းသမားတွေ
လက်နက်ပုန်းနဲ့ပစ်၊ အဆိပ်ပန်းပွင့်တွေ ဖြန်း
လမ်းဘေးက သူတောင်းစားလည်း ပါတယ်၊
အရူးပါးလည်း ပါတယ်၊ အမူးသမားလည်း ပါတယ်
နောက်ဆုံး၊ အားလုံးနီးပါး သေဆုံးပြီးမှပဲ
ထိပ်သီး သုံးယောက်က ငြင်းဆန်တယ်
တစ်ယောက်က “၄၃၆” သိုင်းကွက်ကိုသုံးတော့
တစ်ယောက်က ” ပြည်သူ့အင်အား” လက်မှတ်တွေနဲ့ပစ်တော့
တစ်ယောက်က “ဘာသာရေးပဋိပက္ခ” လက်နက်နဲ့တုန့်ပြန်တယ်
တစ်ယောက်က “နိုင်ငံခြားမိတ်ဆွေတွေ” ကို အကူအညီတောင်းတော့
နှစ်ဖက်စလုံးကို ရေတိုက်၊ မုန့်ကြွေး
“ကားပါမစ်” လက်နက်နဲ့ ပစ်တော့
သူ့လက်ထဲက “ဖွဲ့စည်းပုံသိုင်းကျမ်း” ကို
“နှစ်ဆယ့်ငါး ရာခိုင်နှုန်း” တိုက်ကွက်အပြင်
“စစ်အုပ်ချုပ်ရေး”၊ “ပုဒ်မ ၁၄၄” နဲ့
“ည..မထွက်ရ” သိုင်းကွက်တွေကို ပြင်ဆင်ခင်းကျင်းပြီး
အလုအယက် ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေကြလေရဲ့… ။ ။ ။
(ချစ်သူငယ်ချင်းများကို နောက်ပြောင်ကျီစယ်ခြင်း။ စက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၄)
One Response to အောင်ဒင် – သိုင်းလောက
Catwoman on September 20, 2014 at 4:48 am
Who are your friends? Cronies? Generals?